Color sorter machine,optical pag-uuri machine para peanut,optical color sorter
optical color sorter for peanut sorting
Liqabane elithembekileyo ngenxa izisombululo ehlangeneyo. Ingqolowa Effective okhetho ukuba kunyuswe ingeniso.
Ibonelela lokhetho enombala izisombululo ZHONGKE for abaqhubekekisi ingqolowa Sibanga migangatho iphezulu WHO yomgangatho wokudla ugxilo kukhuseleko lokutya kunye nezivuno ekwandiseni.
Ukuba bahleli ZHONGKE Umbala kumlungele kuqhubekeko amancinci, aphakathi okanye ezinkulu-isikali kwaye oluthembekileyo okuhlanganisana kunye ukuze iintlobo ngeentlobo izicelo ingqolowa.
Umbala wethu ngomane Sorting Machine zithembekile ukuhlela peanuts ezimhlophe, peanuts ezibomvu, peanuts wachuba netumata kwi iqokobhe, ekrwada, peanuts ezigcadiweyo kunye balanched.
Umatshini bangabhaqa kwaye susa iziphene ebonakalayo: ezifana ngamatye, ingca, nut ingca, iindiza, iziqu, zeerasintyisi, amaqokobhe, gqwanci, ndiyaphila, amathambo, iinkuni, umbona, iglasi, kwaye iqokobhe ngokunjalo engabonakali ekusileleni ngeliso ezinjalo njengoko aflatoxin.
Optical color sorter Specification
Optical color sorter for peanut kernel
Ukuphucula ukhuseleko lokutya kunye nasekunikezeni umgangatho ingqolowa liphezulu
ZHONGKE lokhetho enombala isisombululo Buyiphucula ukhuseleko lokutya ngokususa iinkozo ababesifa esuleleke ityhefu ezinjalo njengoko mycotoxins (umz vomitoxin (UDON okanye alkaloids yiergot umz)
iziphumo ezigqwesileyo ekususeni iimbewu zangaphandle neenkozo wemveliso (umz grass, imbewu yokhula nabanye)
Ukuphumeza bahleli obalaseleyo woqondo ukunceda imbonakalo imveliso esiphakathi, iimveliso: afana neenkozo liphela, umgrayo kukubola
Inkqubo high ngqo ejection kunciphisa zobuxoki niwutshitshise okuziinkozo elungileyo, beninikela kumfula kakhulu saqwalasela niwutshitshise
Ngenxa yokulahleka angako iinkozo elungileyo yokupasa yokuqala, izicelo ezininzi ayidingi ingqolowa ukuba ukuphinda-uhlobo ngoxa ebalekayo amandla eliphezulu, kunjalo, ukuba ukuphinda-uhlobo ukhetho luyafumaneka ukuba kuyimfuneko
Unikezelo isisombululo high umthamo
ZHONGKE bahleli ezamehlo singamiswa ngamnye ingaqwalaselwa ukulungiselela namkunyela Phakathi 500 kg ukuya kwi tonnes 20 ngeyure (umz kwingqolowa)
umthamo Production igcinwa, kunye ixesha ubuncinane kwimveliso kucocwa okanye ukutshintsha uqwalaselo
ha neendleko umsebenzi ophantsi
ZHONGKE bahleli woqondo kukuhlangula nozinzileyo noluthembekileyo kunye imveliso-tracking, auto-ungqamaniso esosula kwindawo ukubukela, oomatshini intsingiselo uziqeshile-qilima enze ngokungaguqukiyo kwixesha elide
Optical Color Sorter video on YouTube channel